North Queensland Tourism kurasikirwa kwemabasa kuti kuwedzere neKisimusi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » North Queensland Tourism kurasikirwa kwemabasa kuti kuwedzere neKisimusi
Nhau Nhau • Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dunhu rakakura vashandi rayo mukati mecheni yese yekugadzirira yakagadzirira mwaka wechando wakabatikana, asi ikozvino vatsva ava, kusanganisira vanopfuura mazana maviri kubva kubazi rezvekushanya, avo vanga vachidzidziswa kwemwedzi vari kuudzwa kuti vawane rimwe basa.
Tropical North Queensland inovavarira kurasikirwa mazana matatu nemakumi mashanu emabasa ekushanyirwa neKisimusi.
TTNQ yekushanyirwa kwevashandi inoderera kusvika kuhafu yehukuru hwayo hwepamberi.
TTNQ kurasikirwa nebasa kwakanzwika kune ese maindasitiri.
Imwe 3,150 Tropical North Queensland mabasa ekushanya acharasika neKisimusi ichideredza vashandi vekushanya kusvika pahafu yepamberi pehutachiona, sekutsvagurudza kutsva kubva ku Tourism and Transport Forum (TTF).
Tourism YeTropiki North Queensland (TTNQ) Chief Executive Officer VaMark Olsen vakati kushanya kwekushanya kwakashandisa vashandi vanosvika zviuru gumi neshanu nemazana manomwe nemakumi mashanu uye, nekushandisa zvisina kunangana kushanya, vakatsigira mabasa anosvika mazana maviri nemakumi mashanu nemashanu pamberi pehosha mudunhu reCairns.
"Pakazosvika Chikunguru 2021, takanga tarasikirwa nevashandi vanosvika zviuru mazana matatu nemazana matanhatu, kunyangwe nerutsigiro rweJobKeeper uye musika wekudzoka mudzimba," vakadaro VaOlsen.
“Dunhu iri rakakura nevashandi vakagadzirira nguva yechando, asi zvino vatsva ava, vanosanganisira vanopfuura mazana maviri kubva kubazi rezvekushanyirwa, avo vanga vachidzidziswa kwemwedzi vari kuudzwa kuti vatsvage rimwe basa.
"Hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti izvi zvichabatsira sei munharaunda medu umo basa rimwe chete pamashanu rakatsamira pakushanya."
“Vashandi vakamira pasi vachirasikirwa nebasa kwemaawa nekuda kwekukiyiwa munzvimbo yavo vanokwanisa kukwira kusvika kumadhora mazana manomwe nemashanu pasvondo COVID-19 njodzi mari inotsigirwa nemari kubva kuCentrelink, ”akadaro.
Advance Cairns CEO Paul Sparshott akati kugona kwehupfumi hwedunhu kudzoka kuchadzikira zvakanyanya kana vashandi vane hunyanzvi vakarasikirwa mubazi rezvekushanya nekugamuchira vaeni.
“Pachave nezvikwiriso zvinosvika kure. Kana misika yezvekushanya ikakanganiswa zvakanyanya inoyerera ichienda kune mamwe maindasitiri anokanganisa hupfumi hwese hwedunhu, ”vakadaro.
Mr. Olsen vakati Tropical North Queensland ndiyo, uye icharamba iri, imwe yenzvimbo dzakakanganiswa muAustralia uye tarisiro yeindasitiri yekushanya yakanga yakaipa.
“Pasina vatengi, mabhizinesi haana mari yekuchengetedza vashandi vavo vane hunyanzvi, vamwe vacho vakawana makore ekudzidziswa munzvimbo dzakasarudzika kuti vave vatambi, vanodhiza masters uye vanokasira masters avo vanopa siginicha yezviitiko mudunhu.
“Mabhizimusi mazhinji ari kuita isingasvike zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari dzaanowana, uye kumberi kubhuka kuri kudzikira nemahotera kudzika kusvika pa5-15% yekugara uye inodarika madhora makumi maviri emadhora muzviitiko zvakamisikidzwa muna Chikunguru naNyamavhuvhu.
"Tine zvikepe zviri kubuda pamwe nevapfuuri vatanhatu chete nevashandi vana uye nzvimbo zhinji dziri mumaawa mashoma ekutengesa, nepo vamwe vaenda kuhope.
“Nemazororo ezvikoro ave kusvika, basa rekushambadzira reTTNQ munaGunyana naGumiguru rinenge richinyanya kuvimba nevashandi vevashanyi kuti vaedze kupa vatengi chivimbo chekuverenga vachiziva kuti shanduko icharamba ichiitika.